Yabbina man'eewwan gabatee fi tarjaawwanii hagamtaa jijjiiruu nidandeessa, akkasumas hojjaa tarreewwan gabatee jijjiiruu nidandeessa.
Akkasumas, sajoowwan kamshaa Guutola irraa, Kabala Gabatee irraa fayyadamuun, tarreewwanii fi tarjaawwan qixaan tamsaasuu nidandeessa.
Yabbina Tarjaa fi mMan'eewwanii jijjiiruu
Yabbina tarjaa tokkoo jijjiiruuf
Hanga qareen sajoo footuu taatutti, qaree hantuttee sarara qoodduu tarjaa irra oolchitii, sararicha gara iddoo haaraatti harkiisi.
Hanga qareen sajoo footuu taatutti, qaree hantuttee sarara qoodduu tarjaa sararatu irra oolchitii, sararicha gara iddoo haaraatti harkiisi.
CommandCtrl gadi qabiitii achiin mirga man'eewwan hundaa ykn sarara gubbaa gitaawaadhaan guddisuuf sarara cuqaasitii harkisi.
Qaree man'ee tarjaa keessa oolchitii, qabduu Dirqala Alt gad dhiibitii, kana booda qabduu xiyyaa gara bitaa ykn gara mirgaa dhiibi.
Fageenya qaree bitaa fuulaa irraa gara qaree gabatee dabaluuf, Dirqala Alt+Shift gad dhiibitii, kana booda qabduu xiyyaa isa gata mirgaa dhiibi.
Yabbina man'ee tokkoo jijjiiruuf
Dirqala Alt+Ctrl gad dhiibitii, qabduu xiyyaa gara bitaa ykn gara mirgaa dhiibi
Hojjaa Tarree tokkoo jijjiiruu
Hojjaa Tarree tokkoo jijjiiruuf, qaree man'ee tarree keessa oolchitii, qabduu Dirqala Alt gad dhiibitii, kana booda qabduu xiyyaa gara olii ykn gara gadii gad dhiibi.
Xumuura gabatee hagamtaa jijjiiruu
Yabbinaa fi hojjaa gabatee tokkoo jijjiiruuf, kan armaan gadii keessaa tokko dalagi:
Gabaticha keessa cuqaasi. Sarartuuwwan keessaa, hagamtaa gabatichaa jijjiiruuf, handaaraa bakka adii fi fajajaa gidduutti harkiisi.
Gara moggaalee gabatee tokkootti barruu marsuuf, gabateewwan walitti aanan jiran qindeessuuf, gabatewwan goodayyaa keessatti saaguu qabda. Gabaticha keessa cuqaasi. guutuummaa gabatichaa filachuuf, AjajaCtrl+A al-lama gad dhiibitii, kana booda Saagi - Goodayyaa filadhu.
Gabateewwanii fuuloota HTML keessaa hagamtaa guutuu amalootaa, akkasumas dhangii OpenDocument keessaa akka ajajootati hinlaatan.
Title is: Gabatee Barruu keessatti, Tarreewwanii fi Tarjaawwanii hagamtaa jijjiiruu